Wishpond: Ku Sameynta Mawjadaha Jiilka Hogaaminta iyo otomatiga | Martech Zone
Arbacada, December 16, 2015 Arbacada, February 9, 2022 Douglas Karr
Waxaa jira duufaan ka socota jihada warshadaha otomaatiga suuqgeynta. Caqabadaha hortaagan gelitaanka barnaamijyada cusub ayaa sii yaraanaya marba marka ka dambeysa, barnaamijyada qaangaarka ah waxaa liqay meheradaha suuqgeynta shirkadaha, kuwa bartamaha ku harayna waxay ku jiraan xoogaa bado qallafsan. Ama way baryayaan inay ku tiirsanaan karaan macaamiishooda-saldhig si ay ugu ekaadaan soo jiidasho iibsade, ama waxay u baahan yihiin inay hoos u dhigaan qiimahooda - wax badan.
Mid ka mid jahwareerka ka jira warshadaha aan jecel nahay ayaa ah Rajo. Sababta Hagaag, sidee ku fureynaa inay bilaash tahay adeegsiga ganacsiyada yaryar ee wax kayar 200 oo xiriir ay ku leeyihiin keydkooda. Oo bilaash ah, kama hadlayno shaqooyin xaddidan - waxay ku timid qalab soo dejin ah, suuqgeyn email ah, bogag soo degitaan ah, otomatig suuq geyn ah, boggaga internetka popups, foomamka, iyo maareynta hoggaanka.
Hagayaasha ayaa la keydiyaa oo dabagal kasta lagu sameeyaa:
Ficillada si fudud ayaa loogu qeexaa isku xirnaanta adeegsadaha macquulka ah:
Marka asal ahaan - wax ka yar kharashka emaylka weyn ee emaylka, waxaad marin u heshay nidaam suuq geyn dhameystiran. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah aaladaha muhiimka ah ee la heli karo:
Goobaha Bogagga - Dhis, daabacaan & A / B imtixaan kala qeybsan Boggaga degitaanka moobaylka ee jawaabta ku bixiya daqiiqado.
Degdeg deg deg ah - U beddelo boggag booqdayaal badan boggag hoggaamiyeyaal leh foomamka soo-saarista websaydhka.
Foomamka - Ku rakib Foomamka Lead-Generation ee boggaaga iyo boggaaga.
Tartanada & Dalacsiinta - Ku socodsiinta Facebook-ga Tartanka, Tartannada Sawirada, Tartannada Instagram Hashtag iyo inbadan.
Gaadiidka Suuqgeynta - Ku kicinta e-mayllada shaqsiyeed ee Hoggaamiyahaaga iyada oo ku saleysan waxqabadkooda iyo tafaasiishooda shaqsiyeed.
Email Marketing - Shakhsi gaar ah ugu yeel emaylladaada hoggaamiye kasta oo ku saleysan waxqabad kasta ama faahfaahin shaqsiyadeed.
Maareynta Lead - Abuur Liisas ku saleysan waxqabadka hoggaamiyaashaada ee boggaaga iyo ololayaashaaga.
Gooldhalinta hogaanka - Ku dhibco hogaamiyaashaada iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda iyo faahfaahinta shaqsiyadeed si aad u aragto midka diyaarka u ah inuu iibsado.
Macluumaadka Lead - Aragti u hel Hoggaamintaada. Arag waxqabadkooda degellada, emayllada ay fureen & in ka badan.
Haddii aad tahay hay'ad, Rajo sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamij hay'ad.
Ma aha in la xuso, waxay sidoo kale leeyihiin is-dhexgalka wax soo saar leh Salesforce, Infusionsoft, Insightly, Batchbook, Highrise, Pipedrive, Contactually, Base CRM, SalesforceIQ, OnePage CRM, Close.io, iyo Clio. Isku-dhafka suuq-geynta iimaylka waxaa ka mid ah Mailchimp, AWeber, GetResponse, Xiriir joogto ah, Benchmark, Kormeeraha Ololaha, Jawaabta Tooska ah, Eventbrite, Mad Mimi, ActiveCampaign, iyo Emma. Waxay sidoo kale leeyihiin kaabayaasha barnaamijka miiska caawinta ee loo yaqaan 'Uservoice', isdhexgalka sahanka ee 'SurveyMonkey', iyo isku xidhka barnaamijka webinar ee ClickWebinar, iyo GoToWebinar. Aan ku xuso isdhexgalka Slack.
Wishpond ayaa kaliya ku dhawaaqday isku dhafka Twilio ee taleefanka iyo SMS.
Haddii aad tahay isticmaale WordPress, waxay leeyihiin waxyaabo loogu talagalay Bogagga Degitaanka, Websaydhada Websaydhada, Foomamka Websaydhka, iyo Tartannada Bulshada!
Saxiix U Saxeex Lacag Bilaash ah
Shaacinta: Waxaan nahay shuraako gacansaar la leh Wishpond waxaanan isticmaaleynaa iskuxiraheena xiriirka intaan boostadan lagu jirnay.
Tags: ActiveCampaignAWeberSaldhig CRMBuug-yarahabenchmarkKormeerka OlolahaGujiWebinarkliyoXirXiriir joogto ahxiriir ahaanEmmadhacdo dhacdoGetResponsegotowbinarSareInfusionsoftSi macquul ahboggaga soo degayaMad MimimailchimpHal Page CRMPipedriveiibinIibintadebcinTartanada BulshadaSurveyMonkeyTwilioUserVoicejawaab celinFoomamka WebsaydhkaDegdeg deg deg ahbarkad
5 Siyaabood oo Nidaamyada Maareynta Nidaamka ee ku saleysan daruurku waxay kaa caawinayaan inaad ku dhowaato Macaamiishaada
29, 2015 at 11: 11 AM
Waan ku faraxsanahay inay fududahay in la dhexgeliyo berkad iyo GetResponse 🙂
Jan 4, 2016 saacadu markay ahayd 6:50 PM
Maqaal weyn, mahadsanid Douglas! Maxay yihiin fikradahaaga ku saabsan dhisaha Bogga Degista Wishpond? Ma fududahay in la isticmaalo?
Xulashada sheybaarada degitaanka ayaa aad u fiican. Is-beddelku wuxuu u baahan karaa xoogaa shaqo, in kastoo!
Feb 3, 2016 markay ahayd 6:36 PM
Taasi waa wax cajiib ah! Waad ku mahadsantahay wadaagida maqaalkan Douglass!